သတင်းလေးတွေတော့ စတက်လာပါပြီ ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » သတင်းလေးတွေတော့ စတက်လာပါပြီ ။
သတင်းလေးတွေတော့ စတက်လာပါပြီ ။
Posted by Foreign Resident on Jun 14, 2012 in Think Different | 43 comments
တကယ့် သတင်း ရင်းမြစ်ကတော့ CNA ကပါ ။
” Communal unrest threatens Myanmar’s future: UN “
Posted: 14 June 2012 1250 hrs
” BANGKOK: A UN envoy has warned that communal violence in western Myanmar posesathreat to the country’s shift towards democracy and said discrimination against the minority Rohingya was behind the unrest.
A state of emergency is in place in Rakhine state where clashes have caused dozens of deaths and forced hundreds of people from both sides to flee their homes since Friday.
Tomas Ojea Quintana, the UN’s Special Rapporteur on human rights in Myanmar, urged the country’s reformist government to tackle the “root cause” of discrimination against Rohingya living in the strife-hit region.
He added: “The underlying tensions that stem from discrimination against ethnic and religious minorities poseathreat to Myanmar’s democratic transition and stability.
“I urge all sides to exercise restraint, respect the law and refrain from violence,” he said inastatement released late Wednesday.
Decades of discrimination have left the Rohingya stateless, scattered around the globe and viewed by the United Nations as among the most persecuted minorities on the planet.
The Myanmar government considers the Rohingya to be foreigners, while many citizens see them as illegal immigrants and view them with hostility.
– AFP/al ”
လိုရင်းကိုပဲ ရှင်းပြရရင် ၊
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် ၊
မစ္စတာ အို ဂျေ ကွင်တားနား က ပြောသွားတာပါ ။
” discrimination against the minority Rohingya was
behind the unrest “
လူနည်းစု ရိုဟင်ဂျာတွေကို နှိမ်ချ ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းဟာ
အခုလို ဆူပူ အုံကြွမှု ဖြစ်ရခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းပဲ တဲ့ ။
” Rohingya are subject to forced labour, restrictions on freedom of
movement, lack of land rights, education and public services,
according toaUN refugee agency (UNHCR) report published in December. “
ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ မတရားခိုင်းစေခံရခြင်း ၊
ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ခြင်း ၊ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိခြင်း ၊
ပညာသင်ခွင့် နှင့် အခြား အခွင့်အရေးများ ချိုးဖေါက်ခံနေရတယ်လို့ ၊
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည် အေဂျင်စီ (UNHCR) က ပြီးခဲ့တဲ့
ဒီဇင်ဘာလ က ထုတ်ဝေတဲ့ အစီရင်ခံစာ မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ် တဲ့ ။
မြန်မာ နိုင်ငံထဲရောက်နေတဲ့ ၊
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဗီဂျေနမ်ဗီးယား ကတော့ ၊
လောလောဆယ် ဘာမှ မှတ်ချက် မပေးသေးပါဘူး ။
များသောအားဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံ က ထွက်ခွာတဲ့ အချိန်ကျတော့မှပဲ ၊
သူတို့ရဲ့ မှတ်ချက်ကို ပြောကြားလေ့ ရှိပါတယ် ။
အဘ ရွာသူားများအတွက် ဘာသာပြန်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ရွာသူားများ အချိန်နှင့် တပြေးညီ သုံးသပ်နိုင်အောင်ပါ ။
ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ အဘ သဘောထား ဘာတစ်ခုမှ မပါပါဘူး ။
( Therefore, Please don’t shoot the messenger ( me ) )
အော် အဘရယ် ကျွန်တော်တစ်ခါ ပြောခဲ့သလိုပါပဲ အဲလိုပြောတဲ့ ကောင်တွေဆီကို ဒီကနေလမ်းစရိတ်အကုန်အကျခံပြီးပို့ပေးလိုက်ပါ သူတို့စောင့်ရှောက်ထားမလား ဆီးပြီးရိုက်သတ်မလားဆိုတာ။
အဘဖောရေ. ကျနော်ပို ့စ်မှာ တိုင်းရင်းသားအခံကမန်တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်း
လက်လှမ်းမှီတာလေး ဖော်ပြထားပါတယ်။အဘဖောပို ့စ်မှာ ယူအင်ရဲ့ အသုံးအနှုန်း
” Communal unrest threatens Myanmar’s future: UN “က နည်းနည်းစိုးရိမ်စရာ။
အင်း ပြသနာကတော့ ခုမှစပြီနဲ့တူပါတယ် အဘရေ။ အခုမှရှင်းရခက်တဲ့ပြသနာစတော့မှာပဲ။ အကိုင်အတွယ် မတတ်ရင်တော့ သေချာပေါက်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြတော့မယ်နဲ့တူပါတယ်။ ဟိုကအတင်းထိုးထဲ့ ကိုယ့်လူတွေကလက်မခံ အဲဒီမှာ ဆူကြပူကြရင်တော့ နိုင်ငံတော်အာဏာပြန်သိမ်းတယ် ဆိုရင်တော့ အဘရေ ခဲလေသမျှသဲရေကျဖြစ်ရတော့မှာပါပဲ။ အစိုးရအနေနဲ့ကလဲ သတ်ပြန်လဲတပြစ် လက်မခံပြန်လဲ တပြစ် လက်ခံပြန်လဲ ကိုယ့်လူတွေကသောင်းကျန်းအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အဘရေ ရင်လေးမိပါသေးတယ်။
အပေါ်က အူးလေးကြီးပြောသလို…အဲဒီငဖွတ်တွေကို သူတို ့ဆီ စရိတ်အကုန်ခံပြီး ပို ့ပေးမယ်..
မလေးတို ့ထိုင်းတို ့မှာ နာတို ့မြန်မာတွေ ခွဲခြား ဆက်ဆံခံရတာတော့ မသိခြင်ထောင် ထောင်နေတယ်..
အဘရေ .. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လို နိုင်ငံမျိုးကတောင် လက်မခံတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလို အမှိုက်ကို ……..
ဒီနိုင်ငံက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံဖို့ဆိုတာ ……. ခေါင်းပေါ်တက်ထိုင်တာထက်ဆိုးတဲ့ စိတ်ခံစားမှုမျိုးပါပဲ .. ။
မြန်မာဘက်ကလည်း … ပြတ်ပြတ်သားသားငြင်းဆန်ပြီး … ရိုဟင်ဂျာဘက်က နာနေသူတွေ ကရုစိုက်စရာမလိုပဲ ………. လုပ်သင့်တာ ၊ ပြောသင့်တာ ပြောရပါမယ် .. ။
လူနည်းစုကိုသာ ဒီလို နေရာပေးကြေးဆို … တို့တစ်ရွာလုံး သူဂျီးတို့ နတ်ပြည်သွားနေကြမယ်ဟေ့ … ။ ဒီအခွင့်ရေး လက်မလွတ်စေနဲ့ …
၁၀ဝ % ထောက်ခံပါသည်…။
သူတို့ဆီမှာက လူ့အခွင့်ရေးအပြည့်အဝ ရှိတာပဲ
သူ့ ဘင်္ဂလားကတောင် လက်မခံဘဲ ခွေးမောင်းသလိုမောင်းထုတ်တာ။
ငါတို့ကဘာလို့ လက်ခံရမှာလဲ။လက်ခံရင် တစ်နိုင်ငံလုံး ကုလားပြည်ဖြစ်သွားမယ်။
ဧည့်သည်ကိုဧည့်သည်လိုပဲ ထားရတော့မပေါ့ ..
လက်ခံထားတဲ့ အိမ်ရှင် က အရမ်းချမ်းသာနေရင်တော့ တမျိုးပေါ့ ..
အဲ တော့ ချမ်းသာတဲ့ အိမ်ရှင်တွေ တစ်ခါလောက် ဒီဧည့်သည်ကို အိမ်ရှင်လို သဘောထားပီး
ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်အောင် စမ်းသပ်ကြည့်သင့်တယ် …
အဲ့လိုလုပ်ထားတာတောင်မှ ဒီလိုလုပ်တယ်ဟာကို။ ဟိုလိုထားလို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့မှာတုန်း။ သူတို့နဲ့ ဘာသာလဲတူ အသွင်အပြင်လဲတူတဲ့ ဘင်္ဂလားကတောင် လက်မခံတဲ့ဟာ ဒီကလက်ခံစရာလားလို့။ လက်များခံလိုက်လို့ကတော့ ဧည်သည်က အိမ်ရှင်ဖြစ်မယ့်ကိန်းပဲ။ အိမ်ငှားက အိမ်ရှင်ကို အပြတ်တိုက်တဲ့ပုံဖြစ်တော့မယ်။ ဒီအကြောင်းတွေးမိရင် သောက်ရမ်းတင်းတယ်။
တို့နိုင်ငံက ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး တန်းတူရတဲ့နေရာတွေဆီကခေါ်ထားပါလား ။ ငါတို့ဆီမှာတော့ သူတို့ကို လက်မခံနိုင်ဘူး ။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် ၊မစ္စတာ အို ဂျေ ကွင်တားနား ကိုပြောလိုက်ချင်တယ် …..ငါတို့ကမတရားဘူးဆိုရင် အဲဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို သူ့အိမ်ခေါ်ထားလိုက်ပါလို့ ။ လူမျိုးတူ ၊ ဘာသာတူ ၊ စိတ်ထား တူတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ကတောင် လက်မခံတာ။ ငါတို့က လက်ခံစရာလား ။
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူမျိုးစုထဲမှာမပါကြောင်း ကမ္ဘာကသိအောင် ရှင်းသင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးလို့အော်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် ၊
မစ္စတာ အို ဂျေ ကွင်တားနား ကို ပြောရမယ်။ ဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေအတွက် အသင်တို့နိုင်ငံမှာ နယ်မြေတစ်ခု
ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံတကာ ပင်လယ်ထဲ သွားလွှတ်လိုက်.. ကပ်ချင်တဲ့ကမ်းကပ်ကြလို့..
မမြင်ရက်တဲ့ ကွင်တားနားတို့က သူ့အမိမြေ ခေါ်ရင်ခေါ်ပေါ့
အေး မြန်မာကမ်းရိုးတန်းမှာ ရစ်သီသီ လာလုပ်ရင်တော့ ခိုးဝင်မှုနဲ့ လက်နက်ကြီးနဲ့သာ ထုပစ်ကွာ
UN ဆိုပေမဲ့လဲတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့သဘောထားလို့ဘဲသတ်မှတ်တယ် ဒို့ဘက်ပဒေါ်စု ပြန်ပြောရင်ကောင်းမှာနိုင်တဲ့ပေါက်ရောက်ကဲ့လူလိုတယ်
ပြောတဲ့အတိုင်းသာ အဲ့လောက်လုပ်ထားပေလို့သာပေ့ါ အဘရယ်…
Father land, Mother land, Naing Group အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့
အခြား မသိရှိကြတဲ့ လုပ်ငန်းကြီးတွေအားလုံး သူတို့တွေပဲ
လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားကြပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေတော့ မသိဘူးလား။
သိပ်သနားနေတယ်ဆိုရင်လည်း သူတို့ နိုင်ငံခေါ်ပြီး
Green Card ပေးလိုက်ပါလား… အဟီးး.. :green: :green:
သွားဖို့ လမ်းစရိတ်မရှိကြလို့ အလှူငွေထည့်ပါဆိုရင်တော့
အနော်တို့က လက်မနှေးပဲနော့… ဒါနဲ့ အဘရေ..
အဘ ဒီတစ်ပတ်ကျော်ရင် ပြန်လာတော့မယ်ဆို.. ဟုတ်ရား…
Welcome Back! ပါနော့…
ပြန်ခါနီး တို့လှေသကြီး Crew တွေကို များများ ကျစ်ပေးနေမှာ
ကဲ…ကိုရွာစားကျော်ရေ…..ကျွန်တော်တော့ ဒီဇယ်စုထားမယ်ဗျို့။ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတင်သွားမယ့် သဘောင်္အတွက်။
” ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတင်သွားမယ့် သဘောင်္အတွက် ”
အဲဒီ သင်္ဘောကိုတော့ အဘ မမောင်းဘူးနော် ။
ဟာဂျာ….အဘကလည်း…။အဲဒီသဘောင်္ကို အဘကမမောင်းဘူးဆိုတော့ ကြိုးနဲ့ဆွဲသွားမလို့လား။ အဲဒါဆို ကြိုးဆက်ထားမယ် နော်။ ဟီ…ဟိ
” Reporter : Do you regards Rohingyas as Burmese nationalities?
DASSK : Illegal Immigrants crossing borders ..
we also need more responsible in-corrupted border control. ”
အမေစုက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ၊
illegal Immigrant တရားမဝင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သူတွေ လို့ ၊
လိမ္မာပါနပ်စွာ ဖြေသွားပြီလို့ သတင်းတွေ တက်လာပြီ ။
there are illegal immigrants from Bangladesh…
rule of law is needed that includes law of citizenship and immigration too…
ဒို့ကြီးမေ ကို ဒို့ ယုံပီးသား ပါ ဆို…..
၁၁ထိုးဘီ ..ဒီညတော့ အိပ်လို့ရတော့မယ် မထင် ….
ဖော်ဇာ … ဒို့ကြီးမေ…
အိုဘယ့် .. ဖော်ဇာ … မြန်မာပြည်…
Thanks A Ba Ko Fore Yayy. :-)
(အမေစုက ရိုဟင်ဂျာတွေကို ၊
လိမ္မာပါနပ်စွာ ဖြေသွားပြီလို့ သတင်းတွေ တက်လာပြီ ။)
တော်တော်ကောင်းတဲ့ အဖြေပါလား အဘဖေါ့ရေ……
The Associated Press – whether she could forgive the junta for ignoring the outcome of those elections and keeping her under house arrest for 15 of the next 22 years, the woman who is seen as an icon of the democracy movement took the high road.
Daw Aung San Suu Kyi – “In some ways I don’t think they really did anything to me, I do not think I have anything to forgive them for.”
WHAT THE WISE WORDS!!!!
သူကြီး ပြောသလို ပါဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် is ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ။
အမြန်ဆုံး နှင်ထုတ်ရုံဘဲ ကျန်တော့တာပေါ့နော်
My question concerned on the situation in the Rakhine state, the ongoing violence if I may. Now that 28 people dead and the violence seemed to be more intensive. How aware are you that this violence would escalate and have an impact on the democratic development in Burma and what do you think should be done in order to protect the Muslim community from discrimination which is one reason for the conflict? Thank you.
I said earlier that what we need is rule of law in the country
we need very clear and precise laws with regards to citizenship to begin with.
But I would like to mention hereavery practical problem
that we have to resolve in the Rakhine state.
I think one of the greatest problems comes from the fear on both sides of the border,
that is to say Bangladesh as well as Burma,
that there will be illegal immigrant crossing all the time,
this is due to the porous border.
I think we need more responsible and incorrupt border vigilance.
နော်ဝေ TV မေး ။
ရိုဟင်ဂျာကို မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ လက်ခံပါသလား ။
ဘင်္ဂလားဒေရှ် နှင့် မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံလုံး ကြောက်ရွံနေရတဲ့ပြဿနာ ရှိပါတယ် ။
နယ်ခြားကို တရားမဝင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သူတွေ က တစ်ချိန်လုံး ဖြတ်နေတာပါ ။
ဒါဟာ ဖြတ်ကျော်ရလွယ်တဲ့ နယ်ခြား ကြောင့်ပါ ။
we need very clear and precise laws with regards to citizenship
တိုင်းပြည်ထဲမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ လိုပါတယ် ။
ရှင်းလင်း ပြတ်သားတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဥပဒေ လိုပါတယ် ။
အမေစုက Yes or No ဖြေမသွားပါဘူး ။
လိမ္မာပါနပ်စွာ နှင့် တိုင်းပြည်ထဲမှာ ၊
တရားမဝင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သူ / ခိုးဝင်သူ တွေ ရှိနေတယ် ၊
သူတို့ နိုင်ငံသား ဖြစ်မဖြစ်ကို
ဥပဒေက ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါလို့ ဖြေသွားတာပါ ။
လက်ရှိ ဥပဒေ အရ ၁၈၂၃ ရှေ့ပိုင်း ကတည်းက ၊
မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ နေခဲ့မှသာ ၊
တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်ပါတယ် ။
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲ မတိုင်မီ ရှိနှင့်သူတွေကိုသာ တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်တဲ့သဘောပါ…။
ခက်တာက ပထစ အစိုးရလက်ထက်တုန်းက အစိုးရကိုယ်တိုင်စည်းဖေါက်ခဲ့တာတွေရှိတယ်..။
အဲ့ဒီ့ကောင်တွေလူ့အခွင့်အရေးအော်ပြီး အိမ်မှာမိန်းမကို နားရင်းရိုက်နေတဲ့ ကောင်တွေ…။
Thank for sharing mother suu saying !
အဲဒါ လူပဲ။ လူတွေဟာလေ ဘယ်လူမျိုးမဆို သူတို့နဲ့ မဆိုင်သရွေ့ ကြားနေဝါဒကို ကျင့်သုံးကြပြီး သူတို့နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လာရင် မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ ဖြစ်သွားကြရော။
Green Rose ကတော့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်ပဲ။ ဒီမြေမှာနေ၊ ဒီရေကိုသောက်၊ ဒီအရိပ်ကိုခိုခွင့်ရနေတာတောင် ကိုယ့်စည်းနဲ့ ကိုယ်မနေပဲ ဘောင်ကျော်လာတာ နည်းနည်းလေးမှ သည်းမခံချင်ဘူး။ အခုအခွင့်အရေးရ တုန်း တစ်ခါတည်း အပြတ်ရှင်းရမှာ။ ကုလသမဂ္ဂ မှာ တစ်ခါတည်းတင်ပြပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးကို ဒီပြသနာထဲ ဆွဲထည့်လိုက်ရမှာ။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်လို့ ဒီလူတွေကို တာဝန်မယူနိုင်ကြောင်း ဒါကြောင့် အခြားသော ချမ်းသာသည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် တာဝန်ယူစေချင်ကြောင်း၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတူသော နိုင်ငံများမှာဆိုလျှင် ဒီလူတွေအတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေနိုင်ကြောင်း… စသဖြင့်ပေါ့လေ… အဲလိုသာဆိုရင် ဒီလူတွေအတွက် တစ်ခုခုတော့ အဖြေထွက်သွားမှာပါ။ ဘယ်တိုင်းပြည်ကမှ လက်မခံချင်ဘူးဆိုတာမျိုး ကုလသမဂ္ဂမှာ အဖြေထွက်လာလျှင်တော့လည်း ရှင်းနေတာပဲ။ ကိုယ့်ဖာသာ ဘာလုပ်လုပ် ဘယ်သူမှ လာမပြောနဲ့တော့ပေါ့။
UN ကလူတွေ ပြောနေမဲ့ အစား စံပြ အနေနဲ့ UN ဝန်ထမ်း တစ်ဦးကို ရိုဟင်ဂျာ တစ်ယောက်လောက်ခေါ်သွားပြီး သူ့အိမ်မှာ တင်ကြွေးထားရင်တောင် မြန်မာပြည် က ၈သိန်းမပြောနဲ့ နောက်ထပ် ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် ကပါ အဆစ်ထပ်ခေါ်လို့ ရသေးတယ် ။
ရိုဟင်ဂျာတွေ အနေအထိုင်မတတ်တာ ဆိုးတာက တကဏ္ဍ၊
နောက်တခုက သူတို့က လူဦးရေ အလွန်အမင်း တိုးပွားနေတာ…။
ရိုဟင်ဂျာတွေက ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ထက် မြန်မာနိုင်ငံကို ဘာကြောင့် လါနေချင်သလဲဆိုတော့
မြန်မာနိုင်ငံက ပိုရေကောင်း၊ မြေကောင်း၊ သဘောကောင်းလို့ ပေါ့…။
ရှေးတုန်းက စကားပုံကြားဘူးတာတော့ မကောင်းကျောင်းပို့တဲ့
So Called Rohinjar should go to their historical relatives of Southern Muslim states of Thailand.
And Thailand should give the independent such that three Muslim states.
မြန်မာပြည်ရဲ့ နို်င်ငံသားဖြစ်မှု..ပြုမှုဥပဒေတွေကို အရင်ဆုံး.. ပြင်သင့်တယ်လို့.. ဟိုးးအရင်ကတည်းကပြောတယ်..။ အခုလည်း ဒီအတိုင်းပဲ..။
ပြီးရင်.. ဒုတိယအရေးကြီးတာက.. ခွဲခြားနှိမ့်ချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပဲ..။
အဲဒီ၂ခုပြီးတဲ့နောက်မှာ.. ရိုဟင်ဂျာမှမဟုတ်.. တရုတ်..ကုလား.. တိုင်းရင်းသားတွေပြသနာတော်တော်များများ ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်..။
စစ်တုရင်ကစားသလိုပေါ့ ပွန်းလေးကို ထိုးကျွေးပြီး power တစ်ကောင်ရအောင်ကြံတာ။
ဒီတော့ ၂ သိန်းသာသာပဲရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ် ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို စတေးခိုင်း(ဘင်္ဂလားမှာ လူဦးရေ ဘယ်လောက်လဲသိကြမှာပါ)ဘာကြောင့်ဘင်္ဂလားကသူ့နိုင်ငံသားကို နှင်ထုတ်ရတာလဲ။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးကို အားကြီးတဲ့ဗမာတွေက အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ပါတယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာအော်ခိုင်း၊ဒီတော့မှ ရက်စက်တဲ့ ဗမာတွေကို နိုင်ငံတကာက ရှုံချ။မြန်မာပြည်ကိုသူ့လူဦးရေတွေဆက်များပြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေချင်တယ်လေ။ ဒါမှရခိုင်ဒေသသူတို့ရမှာပေါ့။ အရင်က ရေပိုင်နက်၊အခုတော့ မြေပိုင်နက်ပါလိုချင်လာပြီလေ ။ဒီတော့ ဘင်္ဂလားနယ်မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ကြမလဲ စဉ်းစားပေးကြပါ ။သေသေချာချာတွေး မပေါ့ဆကြပါနဲ့။
ကျုပ်က.. တချို့ရွာသူားအသစ်တွေရဲ့. ပြီးခဲ့တဲ့.. ၁လလောက်ကနေစပြီး.. ရေးထားသမျှ .ကော်မန့်တွေအကုန်.. တစုတစည်းထဲ.. မျက်နှာလိုက်စီပြီးဖတ်ကြည့်တယ်..
တချို့ရဲ့.. မတူတဲ့ခေါင်းစဉ်.. ပို့စ်တွေအောက်.. ရေးထားတာတွေက… ဘာသာရေးဖက်မှာရော.. လူမျိုးရေးဖက်မှာရော.. နည်းနည်း အစွန်းရောက်နေတယ်လို့.. မြင်ပါတယ်..
အသစ်တွေ.. ကိုယ့်တိုင်လည်း..ကိုယ်ရေးတာတွေ..ကိုယ် ပြန်ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်..
သည်းလည်းခံဖို့မလို.. ခေါင်းလည်းငုံခံဖို့မလို.. ပြဿနာကို..( ကံ…ကံရဲ့အကျိုး. ) သူ့လုပ်ရပ်… အတိုင်းအတာနဲ့. တုံ့ပြန်ဖို့ပါ..။
တုံ့ပြန်ချိန်မှာ.. ဒေါသ..မောဟ..လောဘ..မာန်..မာန.. စတာတွေတတ်နိုင်သလောက်ကင်းကင်းထား.. တုံ့ပြန်ရပါတယ်…
အဲဒါဆို.. ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်..။
သူကြီးပြောတာ ဒီတစ်ခါ တော့ နည်းလမ်းကျပါတယ် လို့ ထောက်ခံသွားပါတယ်။
ကျွန်မ လဲ ဓားကို အိတ်ထဲ ပြန်ထည့် လိုက်ပါပြီ။
(ဟိုဖက်ပို့စ်တစ်ခုမှာတော့ မန့်ပြီးသွားပြီ။ ဖတ်စေချင်ကြလို့ ထပ်တင်လိုက်ပါတယ်။)
အခုဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ဒေသအရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီက သူတို့သဘောထားကို ကြေငြာလိုက်ပါပြီ။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်ကတော့ သူတို့ကြေငြာချက်ကို မျှတတယ်လို့ ထောက်ခံပါတယ်။
The Voice Weekly မှကူးယူဖော်ပြသည်..။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂါလီများ၏ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်
ပတ်သက်၍ မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ၏ သဘောထား
မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ဌာနချုပ်
အမှတ်(၂/၂/၂၃၂) မဟော်ဂနီလမ်း ၊ ထောက်ကြံ့တိုးချဲ့၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ၊
ဖုန်း – ဝ၉၈၆၁၀၇၁၉
ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၃) ရက်
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ရပ်တည်ချက် သဘောထား ထုတ်ပြန်ခြင်း
၁။ မြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘင်္ဂါလီ လူမျိုး
တိုင်းတပါးသားများ ကျူးကျော် ဝင်ရောက် နေထိုင်ပြီး ဒေသခံ
တိုင်းရင်းသားများ၏ အသက်အိုးအိမ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို
နှောက်ယှက် ဖျက်စီးနေမှုများ ၊ မီးရှို့သတ်ဖြတ်နေမှုများ စသည့်
လုပ်ရပ်များအပေါ် မတူကွဲပြားခြင်း နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ မှ ရပ်တည်ချက်
၂။ ဤဖြစ်ရပ်သည် မြန်မာပြည်တွင် မူလနေ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သော
အခြားတိုင်းတပါးမှ လူမျိုး ကွဲများက မြန်မာပြည်အတွင်းသို့ တဖြည်းဖြည်း
စိမ့်ဝင်နေထိုင်လာရာမှ နယ်မြေအပိုင်စိုးမိုးရေးအတွက် ကျူးကျော်မှုကို
ပေါ်ပေါ်တင်တင် အကြမ်းဖက်မှု ပုံစံဖြင့် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်လာရာမှ
ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု မှတ်ယူ ပါသည်။ အဆိုပါ လူမျိုးကွဲ ဘင်္ဂ ါလီ
အကြမ်းဖက်သမားများက မူလနေတိုင်းရင်းသားများအပေါ် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ပြီး
မနေထိုင်ဝံ့အောင် မောင်းထုတ်သည့် အပြုအမူများဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား
များ၏အိုး အိမ်များ ကိုမီးရှို့ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နေသည်ကို
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတို့က သိရှိမှတ်သား စေလိုပါသည်။
၃။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကို
လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်သူအဖြစ်သို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များနှင့် ကုလသမဂ္ဂက
မှတ်ယူလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတွန်းပို့နေသော လုပ်ရပ်များ
လုပ်ဆောင်နေသည် ကိုလည်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။ အရပ်သား အသွင်ဆောင်ထားသော
လုပ်ကိုင်ရခက်ခဲစေရန် အကွက်ချဖန်တီးမှုများ ထိုဘင်္ဂ ါလီများ၏
ဝါဒဖြန့်သတင်းဌာန များမှ သတင်းအမှားများ ဖြန့်ဝေနေခြင်းကိုလည်း
တွေ့ရှိရပါသည်။ မည်သည့်တိုင်းပြည်ပင်ဖြစ်စေ ဤကဲ့သို့ သော
နယ်မြေဆုံးရှုံးခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ သော အရေးယူမှုများ
ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းမှုများ ပြုလုပ်ကြရမည်ကို နားလည်သဘောပေါက်သည့်
အားလျှော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တိုင်းတပါးကျူးကျော်မှုရန်ကို
ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ပစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ၏
မတူကွဲပြားခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပါတီမှ ထောက်ခံပါသည်။
၄။ အဆိုပါလူမျိုးကွဲ တိုင်းတပါးသားများ စိမ့်ဝင်နေထိုင်မှုကိုလည်း
အမြန်ဆုံးစိစစ်ပြီး ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးပါ ရန်နှင့် တိုင်းတပါးသားများ
စိမ့်ဝင်နေထိုင်မှုအတွက် တာဝန်ပေါ့လျော့သူများ လုပ်ကိုင်စီမံမှု
ညံ့ဖျင်းသူများကို လည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် ပြည်ထောင်စု
အစိုးရအဖွဲ့ကို တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် သားများ၏
ဘဝလုံခြုံရေးကို ရေရှည်အာမခံနိုင်မည့် အစီအစဉ်များကိုလည်း
လူအများသိရှိနိုင်စေရန် ပြည် ထောင်စုအစိုးရမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါရန်လည်း
၅။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကနဦးနေထိုင်ကြကုန်သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
အပေါင်းတို့အားလည်း အထူး အသိပေးလိုသည်မှာ ဌာနေအစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များသည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ရပြီးသော ဌာနေများ စာရင်းတွင်
ပါဝင်ပြီးဖြစ်သဖြင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုသာ အခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
နှင့် အမိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေး ကို
ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သစ္စာစောင့်သိရမည် ဖြစ်ပေသည်။ သို့ပါသောကြောင့်
နိုင်ငံခြားမှ ဝင်ရောက်လာသူ များအပေါ် ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာတူဟူ၍ ဘက်လိုက်
လိုက်ပါပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုမိကြစေ ရန် အထူးအသိပေးအပ်ပါသည်။
၆။ ပြည်တွင်းရှိ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်မဟုတ်သော အခြားဘာသာများဖြစ်သည့်
ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များသည်လည်း ဘာသာရေးကိုအခြေခံပြီး
ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမပြုမူဘဲ နိုင်ငံ သားအမြင်ဖြင့်သာ
စဉ်းစားလုပ်ကိုင်ကြပါရန် လေးနက်စွာ အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၇။ တိုင်းတပါးမှ ဝင်ရောက်လာသူများကိုမူ ဘာသာတူခြင်း/ မတူခြင်း၊
လူမျိုးတူခြင်း/ မတူခြင်း အပေါ် အခြေခံ၍ ခွဲခြားရမည်မဟုတ်ဘဲ
နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း/ မဖြစ်ခြင်း ကိုသာ အခြေခံပြီး
ပြည်တွင်းဥပဒေများနှင့် အညီ စည်းကမ်းနည်းလမ်းတကျ လုပ်ဆောင်ကြပါရန်
၈။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံးတွင်
ဖြစ်စေ ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြား တွင်ဖြစ်စေ မည်သည့် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု/
နယ်မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှု ကိုမဆို မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်
ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ မှ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ရှုံချပါကြောင်း ကြေညာ
မြန်မာနိုင်ငံ ကို နောက်ကြောင်း ပြန်မလှည့်ရအောင် မခြိမ်းခြောက် သင့်ဘူး ဆိုပြီး မီဒီယာတွေက နေတဆင့် သတင်းတွေ ဖြန့်ပြီး တိုက်တွန်း သင့်တယ်။